Isikhokelo sokufakwa kweLinux Mint 18.2 Sonya | Ubunlog
I-Linux Mint 18.2 Sonya
Sele sineeveki ezininzi sakuba sikhutshiwe Inguqulelo entsha yeLinux Mint Enye yezona ndawo zaziwayo zokuhanjiswa kweLinux esekwe kwifilosofi yayo "kukunikezela ngeNkqubo yokuSebenza yale mihla, intle kwaye intofontofo kwangaxeshanye inamandla kwaye kulula ukuyisebenzisa".
I-Linux Mint 18.2 Sonya ligama lenguqulo entsha kolu lonikezelo lweLinux isekwe kwi-Ubuntu, kunye nokuphuculwa kokudluliselwa kwefayile ye-OBEX, ikongeza nenguqulelo entsha yeXplayer kunye nezinye izinto ezininzi.
Izidingo zokufaka iLinux Mint 18.2 Sonya
I-512MB RAM (i-1GB iyacetyiswa).
I-9GB yendawo yasimahla yediski (kucetyiswa i-20GB).
Ikhadi lemizobo 800 × 600 isisombululo esincinci (1024 × 768 siyacetyiswa).
IDVD drive okanye izibuko le-USB
Uyifaka njani iLinux Mint 18.2 Sonya
Siza kuqhubeka nokukhuphela kwifayile ye- iso indawo esemthethweni yenkqubo, Ndincoma ukukhuphela nge-Torrent okanye kwi-Magnet link.
Nje ukuba ukhuphelo lwenziwe ungatshisa iso kwiDVD okanye kwi-USB ethile. Indlela yokwenza kwiDVD:
Windows: Singarekhoda iso nge-Imgburn, I-UltraISO, uNero okanye nayiphi na enye inkqubo ngaphandle kwazo kwiWindows kwaye kamva zisinika ithuba lokucofa kwi-ISO.
I-Linux: Banokusebenzisa ngakumbi leyo iza neendawo zemizobo, phakathi kwabo zezi, IBrasero, k3b, kunye neXfburn.
Ufakelo oluphakathi lwe-USB
IWindows: Banokusebenzisa Isifakeli se-USB sendalo iphela okanye iLinux Live USB Creator, zombini kulula ukuyisebenzisa.
I-Linux: Ukhetho olucetyiswayo kukusebenzisa i-dd command, kubalulekile ukuba ujonge ukuba yeyiphi i-usb efakelweyo ukuqhubeka nokurekhoda idatha kuyo:
dd bs = 4M ukuba = / indlela / eya / kwiLinuxmint.iso ye = / dev / sdx && sync
Nje ukuba imithombo yeendaba yethu ilungile, kufuneka kuphela ukuba i-BIOS iqulunqwe ukuze iibhothi zePC ezivela kwiyunithi yofakelo emiselweyo.
Isikrini sokufaka sokuqala seLinux Mint 18.2 sijongeka njengoku:
Apha kuyakufuneka benze njalo khetha ukhetho lokuqala yeyiphi leyo "Qalisa iLinux MintOlu khetho olungagqibekanga kwaye ke ukuba awukhethi nayiphi na eza kuqala ngale.
Ngoku izakuqala ukulayisha yonke into eyimfuneko ekufakweni kweLinux Mint 18.2 Sonya, ekupheleni kwale nkqubo izakusibonisa isikrini kukho i icon ngohlobo lwe CD ethi "Faka iMinu yeLinux", Siza kucofa kabini kule icon ukuqala i-installer.
Xa uqala i-installer, iya kusicela masikhethe ulwimi apho luya kufakwa khona Inkqubo entsha yeLinux Mint. Kulo mzekelo ndikhetha iSpanish.
Siqhubeka ngeqhosha "Qhubeka".
Kwiskrini esilandelayo kuya kusicebisa ukuba sifake isoftware yomntu wesithathu, i-mp3, ifleshi, abaqhubi abanelungelo lemizobo, i-wifi, njl.
Ngoku kweli candelo Izakusibonisa uhlobo lofakelo nokwahlulahlula idiski.
Sibona uluhlu lwezinto onokukhetha kuzo:
Cima yonke idiski ukufaka iLinux Mint
Faka iLinux Mint kunye nezinye iinkqubo zokusebenza ukuba sele unayo
Olunye ukhetho, luyakusivumela ukuba silawule izahlulelo zethu, senze ubungakanani kwakhona kwidiski enzima, ucime izahlulelo, njl. Ukhetho olucetyiswayo ukuba awufuni kuphulukana nolwazi.
Emva koko Siza kukhetha ulwahlulo ukufaka iLinux Mint okanye ukhethe i-hard drive epheleleyo. Kwimeko yokukhetha ulwahlulo, kuya kufuneka silinike ifomathi efanelekileyo, esele inje.
Chwetheza isahlulelo "ext4" kunye nenqaku lentaba njengengcambu "/".
Isilumkisa ukuba nasiphi na isahlulelo esasikade sikhona siza kucinywa (kwimeko yethu asiyongxaki kuba bekungekho nto ngaphambili). Sinqakraza kuqhubeka.
Izakusibonisa isikrini kunye nesishwankathelo sokwahlulahlula. Cofa uqhubeke.
Xa ukhetha imowudi yofakelo, iya kukucela ukuba uqinisekise ngotshintsho kwaye wenze njalo kuya kufuneka ucofe nje ku "Qhubeka" iqhosha.
Ngelixa le nkqubo ifakwa, iya kusicela ukuba siqwalasele ezinye iindlela, ezinje ngendawo esiza kuzifumana kuyo kwaye sinike ulungelelwaniso oluthile kwindawo yethu:
Kuqwalaselo lwebhodi yezitshixo siza kukhangela ngolwimi kunye nohlobo lwebhodi yezitshixo.
Ngoku Icandelo lokugqibela liza kusicela ukuba senze iakhawunti yomsebenzisi kunye negama eligqithisiweyo kufanelekile. Sinokukhetha kwakhona ukuba sifuna ukuzichonga ngalo lonke ixesha inkqubo iqala, okanye ukuba sifuna ukuba inkqubo iqale ngokuzenzekelayo ngaphandle kokucela ukungqinisisa.
Nje ukuba ukucwangciswa kugqityiwe, kuya kufuneka silinde kuphela inkqubo yokufaka kunye nokuvela kwilivo lokwazisa ukuba ufakelo lugqityiwe.
Kuya kufuneka siqale kabusha.
Xa uqala kwakhona inkqubo uya kuba nakho ukungena ngegama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha olileleyo ngexesha lofakelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ulwabiwo olusekwe kubuntu » Linux mint » Isikhokelo sokufakwa kweLinux Mint 18.2 Sonya
Enkosi konke kuchazwe kakuhle, ndiyifakile kwi-Acer Aspire One, ngeprosesa endala yeAtom kwaye ibiyinto entle, i-netbook ibuyile ebomini.